Musiibo sababtay inuu Shabeel ku seexdo sariir ay qoys leeyihiin |
Saraakiil ka socda hay’ad ka shaqeysa ilaalaalinta xuquuqda duur joogta ayaa tagay guriga uu shabeelka galay waxayna u bixiyeen waddo ay si nabad ah ugu baxsan karto.
Sida laga soo xigtay hay’adda xuquuqda duur joogta ee dalka Hindiya, shabeelkan dhadiga ah ayaa markii ugu horreysay maalintii Khamiista ahayd lagu arkay waddo qiyaastii 200 oo mitir u jirta xerada ay kasoo baxsatay.
“Aad bay u daallaneyd waxayna heshay hurdo dheer oo maalin ah”, sidaas ayuu ku yidhi wareysi uu siiyay BBC-da.
“Arrinta fiican waxay ahayd in qofna uusan hurdada ka qasin oo ay si fiican u nasatay. Gobolkan aad baa looga qaddariyaa xayawaanka duurjoogta ah”, ayuu yidhi Mr Barman.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu intaas ku daray: “Motilal wuxuu sheegay inuu xasuus ahaan u xafidi doono furaashka iyo barkinta uu shabeelku ku seexday”.